Howlgalo saakay laga sameeyay Xaafado ka tirsan Dhar-keenleey
Home Somali News Somali Government Howlgalo saakay laga sameeyay Xaafado ka tirsan Dhar-keenleey
Ciidamada Nabad sugidda Qaranka Soomaaliyeed, ayaa saakay waxay howlgalo ballaaran ka sameeyeen degmada Dhar-keenleey ee Caasimada Muqdisho.
Howlgalkaan oo ahaa mid aad ubalaaran islamarkaasna ay ka qayb qaadanayaan Ciidamada Booliska, Milatariga iyo Nabad sugida ayay Ciidamadu ka sameeyeen xaafado kamid ah degmadaas, xaafadaha sida gaarka ah howlgalada u saameeyeen waxaa kamid ah Rabi Sali, Suuqyaraha, iyo Xaawo taako.
Intii uu socday howlgalkaan ayay Ciidamada gacanta kusoo dhigeen dad aad ufarabadan oo isugu jira kuwo lagu tuhmayo ineey Al-shabaab qayb kayihiin, iyo kuwo loo maleeynayo ineey yihiin burcad dadka dhibaateeysa, sidokale waxaa kujiray dad layska soo qabtay oo aan wali wax baaritaano ah lagu samayn.
Afhayeenka Nabadsugida G/banaadir Ereg, ayaa mar uu saxaafada lahadlayay waxa uu sheegay in Ciidamada ay gacanta kusoo dhigeen hub iyo rag isugu jira shabaab iyo burcad.
Howlgaladaan ayaa sidoo kale kusoo aadaya iyadoo shalay degmada Wadajir dil loogu gaystay wariye ka tirsanaa Idaacada Shabelle, mana jirto ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay dilkaas.